Chikumi 9, 2018 arun
Zviremera Korean handiwani zvisiri pamutemo basa Bithumb kuongorora
The feya kupfuura Exchange muSouth Korea, Bithumb nematare akawanda South Korean kunoratidza kuti pakanga pasina chakaipa pamusoro kambani achimiririra, pasinei yakakura mutero bhiri.
Bithumb zvino ane mutero rugwaro 30 bhiriyoni yakahwina kubhadhara, izvo zvakafanana nehasha $28 miriyoni.
A mutero bhiri kuti guru hazvishamisi chaizvo, sezvo kuchikuva mirairo avhareji mari kuti 0.3% pamusoro nehasha $250 mamiriyoni kwema pazuva.
Kana Bithumb akapa ichi zvikuru zvakaenda, zvaizoreva kuti kambani inoita inoshamisa dimikira nehasha $750,000 pazuva, izvo zvakafanana zvinenge $274 miriyoni pagore.
Tags: bitcoin, nhau
Ontology chinonyengera mararamiro akisarareta - Ontology Olympus akisarareta OOA
Ontology, a new high-performance public multi-chain project and a distributed trust collaboration platform, vakazivisa Ontology Olympus akisarareta (OOA).
Chirongwa koka zvemichina uye chigadzirwa nyanzvi mhiri minda kubatana mune Entrepreneurship uye kuvaka itsva zvakaparadzira mafomu zvebhizimisi yakavakirwa Ontology anotevera-chizvarwa paruzhinji Chain kwezvivako kuvaka pachena-mabviro, murangariro wakavhurika, uye pakubatsirana vakagovera chivimbo mararamiro.
The Ontology Olympus akisarareta chirongwa ichapa wakakwana hwokugadzira, Marketing, mari, chipo, uye zviri pamutemo kutevedzera rutsigiro. The Ontology Foundation achaita mari inenge 1.5 bhiriyoni USD worth of tokens, zvose izvo ichashandiswa kutsigira ramangwana kukura zviripo startups uye zvikwata vakasarudzwa.
Norwegian Air CEO kuti vomurova crypto Exchange
Billionaire Norwegian Air CEO Bjørn Kjos ari nezvekutanga mumwe cryptocurrency Exchange ainzi Norwegian Block Exchange, uye kufanana katsamba Norwegian Air zvino anobvuma cryptocurrency semubhadharo.
Pakuvamba, wekambani NBX Exchange, akanga amutsa $250,000 ari fundraising kumativi.
The CEO akati "Tiri kutarira zvinhu nyore kukwira… kuva cryptocurrency semubhadharo Ipfungwa ari vendege, Tinoona kuti pane kudikanwa pamusika chakakura apo unogona kutenga nokutengesa cryptocurrencies. "
NBX ane chinzvimbo zvirongwa chinangwa rivaling exchanges vakaita GDAX uye Kraken
Kraken Daily Market Mushumo 08.06.2018
$88.8M nhumbi mhiri misika zvose nhasi
Chikumi 13, 2018 pa 5:16 PM